Fired: MyBlogLog na BlogCatalog Wijetị | Martech Zone
Maka ndị gị kemgbe nke na - agụ akwụkwọ ogologo oge, ị ga - achọpụta na ewepụrụ m wijetị MyBlogLog na BlogCatalog. M gbalịrị iwepu ha ruo oge ụfọdụ. Enwere m obi ụtọ ịhụ ihu ndị folks na-eleta blog m mgbe mgbe - ọ mere ka ndị na-agụ ya yie ndị ezigbo mmadụ karịa stats na Google Analytics.
Emere m nyocha zuru ezu banyere isi mmalite ọ bụla na otu ha si achụga okporo ụzọ na saịtị m yana otu ndị ọbịa m si emekọrịta na saịtị ahụ. Ikekwe ihe kachasị amasị m na wijetị bụ:
MyBlogLog foto efu. Ọ bụrụ na ị na-aga na-ebipụta a wijetị nke ahụ na-egosi foto, mgbe ahụ naanị gosi foto.
BlogCatalog onyogho bụ n'ezie mgbasa ozi maka saịtị ndị mmadụ. Nke a bụ mgbasa ozi n'efu ma ọ bụghị ihe m debanyere aha.
Ọnwa anọ gara aga, agara m n'akụkụ dị ọcha - kpochapụ blog m Teknụzụ, Ebuka, na BlogRush. Technorati yiri ka ọ na-arụsi ọrụ ike iji mee ka uche ha laghachi na blọọgụ - enwere m olile anya na ha ga-alaghachi azụ. BlogRush emeghị ihe ọ bụla ọ na-emetụta ya.
FuelMyBlog na BlogCatalog ka bu ezigbo ngwa oru ohuru ndị na-ede blọgụ ịchọta ndị na-agụ akwụkwọ ọhụrụ. MyBlogLog abanyela n'igwe ojii na Yahoo! odikwa ka o nweghizi isi.
Site na puku mmadụ ole na ole na-agụ akwụkwọ kwa ụbọchị (site na weebụ na RSS), MyBlogLog emeela ka ndị ọbịa 16 bia na blọgụ m:
BlogCatalog; ma, kpọtara m ndị ọbịa iri ise na asatọ n’otu oge ahụ.
Ye ndusụk owo, oro ekeme nditie nte nti utịp. Nsogbu bụ na nke a bụ ezigbo ala na ụlọ na blọọgụ m. Ogwe aka nri bụ ebe ọtụtụ n'ime ndị na - agụ akwụkwọ m na - emekọ ihe mgbe niile na mkparịta ụka, edemede, vidiyo, wdg. n'ụlọ peeji… Bụghị 1.
Ajụjụ ndị m kwesịrị ịza bụ:
Kedu uru ndị ọbịa m nwetara site na wijetị? Amaghị na uru ọ bụla bara uru ebe ọ bụ na ọ nweghị onye ya na ha mekọrọ ihe.
Kedu uru m nwetara site na wijetị? Ma uru ndị ahụ karịrị uru ndị na-agụ m ga-enweta site na iji ohere ahụ maka njikọ ha mere na-emekọrịta ihe?
Nkwubi okwu m bụ na uru m na-erite ezughi ịtụfu nnukwu akụkụ nke ala ụlọ ala. Ekwenyere m n'ezie na ọrụ ndị a niile na-erite uru karịa na okporo ụzọ gị karịa ka ị ga-esi enweta ha.
N'ihi ya… ha chụrụ n'ọrụ!
Ka na-enyocha nleta na saịtị gị site na BlogCatalog ma ọ bụ MyBlogLog? MyBlogLog na-amasị m maka stats yana ịhụ ndị mmadụ na-eleta, ọ bụ ezie na ahụrụ m ihe ị na-ekwu maka iwere ụlọ na blog. Echere m na m ga-agagharị MyBlogLog ruo n'okpuru n'ụkwụ m na-esote, mana m ga-edebe ya.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ha abụọ anaghị arụ ọrụ ha nke ịkpọbata ndị ọrụ, gịnị bụ? O doro anya na ị na-eme nke ọma, Doug, ọ bụ ndenye aha niile na nyocha okporo ụzọ na-ewetara gị ihe ma ọ bụ ihe ọzọ na-arụ ọrụ maka gị?
M a nnukwu kwere ekwe nke irite onye ọ bụla esenowo na m blog. M na-achọ blọọgụ ọhụrụ oge niile, kwuo okwu na blọọgụ ha, ma zaghachi (:)) na ndị folks n'onwe m. M na-aza ọtụtụ ozi ịntanetị dịka m nwere ike mgbe akpọtụrụ m.
Na mgbakwunye, Echere m na klaasị mpaghara m na-eme na ịde blọgụ na ihe ndị m na-ekwu na-enyere aka nke ukwuu. Enwere m nnukwu netwọk nke ndị enyi na ndị ọrụ ibe!
Achọrọ m ịkwalite azụmahịa na ọrụ ndị nwere ike ọ gaghị abụ 'isi' ma nweta ọtụtụ nlebara anya. Ana m eme ya karịsịa mgbe ha bụ ụlọ ọrụ mpaghara. Ọ na-amasị m inyere ndị mmadụ aka na azụ ụlọ m!
PS: Idebe blọọgụ kachasị dịkwa kapeeti na-acha uhie uhie maka nyocha okporo ụzọ ọchụchọ… ma ezigbo ọdịnaya na aka onwe onye na-ejide ndị na-agụ akwụkwọ ọhụrụ.
Etinyere m obere ọkọlọtọ na ala nke sidebar nke Clark's Picks maka ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ ịkparịta ụka n'thatntanet m sonyeere. Amụma, ana m enweta okporo ụzọ site na nke m na-agakarị, ọkachasị Fuelmyblog.
Ugbu a, m na-anwale Entrecard na Spott maka okporo ụzọ ahụ. Have nwere echiche ọ bụla na saịtị ndị ahụ?
Daalụ maka ịkekọrịta nyocha ọnụ ọgụgụ gị na ndị ọzọ. Ebee ka ịchọta oge?!
dị ka a ọrụ ahịa ọhaneze, anyị na-arụ ụka mgbe niile banyere wijetị iji mee ihe maka ndị ahịa ọ bụla na amaghị m ihe m ga-atụ aro.
My sneaking enyo bụ na ha niile dị "lingta" na adịghị ụgbọala ezigbo okporo ụzọ. Mgbe m chọrọ ịjụ ndị nyocha ahụ ịlele…
Ugbu a ka m maara…
Gaa n'ihu, m ga na-agụ !!
Ọ dị ukwuu na ị rụrụ ọrụ iji hụ ihe na-ebugharị okporo ụzọ na saịtị gị na ihe na-abụghị.
Ekwesịrị m ime otu ihe ahụ na weebụsaịtị m !!!
Obi ụtọ ịhụ BlogCatalog na-ewetara gị ụfọdụ okporo ụzọ bara uru. O nwere ike ọ gaghị abụ ọnụọgụ ma ọ bụ nọmba Digg mana ị ga-ahụ na ndị otu anyị 'rapaara n'ahụ' karịa ọtụtụ netwọkụ ndị ọzọ.
Ọ dị nwute na m hụrụ na i wepụrụ wijetị BlogCatalog, mana ọ dịka ọ nwere ezigbo ihe kpatara ịme ya. Have lelee ngwa wijetị ndị ọzọ anya n’oge na-adịbeghị anya? anyị nwere ọtụtụ ole na ole na-egosipụta akụkụ dị iche iche nke ọrụ ntanetịime gị na / ma ọ bụ nke netwọkụ mmekọrịta. Nke a nwere ike bụrụ ihe na-adọrọ mmasị ndị na - agụ akwụkwọ gị karịa ụfọdụ ihu na - enweghị atụ ebe ọ bụ na ọ dịkarịrị anya na ọdịnaya. Were dịka ọmụmaatụ Ngwaọrụ nri anyị, nke na-eme ka ọrụ mmekọrịta gị ka njọ: http://www.blogcatalog.com/account.widget.php?type=feed
Ngwaọrụ anyị niile na-esokwa ihe ndị otu BC na-agụ blọọgụ gị n’enweghị igosipụta foto / mgbasa ozi na wijetị.
Nọgide na-arụ ọrụ dị ukwuu,
Mee 30, 2008 na 1: 01 PM
BlogCatalog na-adịghị mma adịghị agafe ọ bụla PR ebe ọ bụ na ha na-eji nofollow.
Ndewo Douglas, ọ dị mma ịhụ gị na Twitter, ọ bụ ka m si bia ebe a. Nwee mmasị ịmara otu Twitter si arụ ọrụ maka gị. Ekwenyere m na o gha agha elu ndi ahu ugbua! Nwee mmasị ịnụ banyere Technorati. M na-ahụ ọtụtụ ndị na-ahapụ ebe nrụọrụ weebụ m site na Technorati, mana ole na ole na-abata n'ụzọ ahụ na saịtị m…
Mikes @ OziBlog1st
Naanị ihe mere m ji nwee Mybloglog, blogcatalog, mmanụ myblog bụ n'ihi na achọrọ m ịhụ ndị bịara. n'ụzọ ahụ m nwekwara ike ịlele blọọgụ ha. ma eleghị anya, dị ka ihe ịrịba ama nke na-enye azụ na m ka m mara ihe ikekwe zigara ha na saịtị m.